Inona no ho hita sy atao any Aix-en-Provence, France | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, Frantsa, General
Any atsimon'i Frantsa, Akanjo Aix-en-Provence amin'ny jiro manokana, miaraka amin'ny andro maramaso sy ny toetrandro mahafinaritra. Ity hazavana sy lokon'ny Provence ity no nahasarika ireo mpanao hosodoko toa an'i Cézanne, izay aingam-panahy avy amin'ity tanàna tsara tarehy ity amin'ny asany maro be. Tanàna tena tsara sy mandray olona, ​​lavitra ny toerana fizahan-tany be loatra sy be olona.
Aix-en-Provence no toerana mety indrindra hahita an'i Frantsa namana namana indrindra ary tantaram-pitiavana. Tanàna mahafinaritra miaraka amin'ny zoro maro hahitana. Toerana mety hialana sasatra rehefa mankafy ny toetr'andro sy ny endrika mahafinaritra. Jereo izay rehetra hitanao sy ataonao eto amin'ity tanàna akaikin'i Marseille ity.
1 Araho ny dian'ilay mpanao hosodoko Cézanne
2 Tranombakoka ao Aix-en-Provence
3 Katedraly Saint-Sauveur
4 Kianja lehibe
6 Ahoana ny fomba hahatongavana any Aix-en-Provence
7 Aiza no hijanonana ao Aix-en-Provence
Araho ny dian'ilay mpanao hosodoko Cézanne
Tsy azo atao ny mitsidika an'i Aix-en-Provence raha tsy te hahita ireo tranokala manana ny toetrany malaza indrindra, ny mpanao hosodoko Cézanne. Cézanne dia nanokana ny ankamaroan'ny sangan'asany mba hanehoana toerana eny an-tanàna, satria izy dia tia ilay hazavana Aix-en-Provence. Teraka tao amin'ny rue de l'Ópera izy ary maty tao Boulegon. Ny iray amin'ireo toerana tsidihina matetika dia ny Cézanne Workshop, toerana nandokoany isan'andro tamin'ny 1902 ka hatramin'ny 1906. Toerana nanatanterahana asa izay aseho ankehitriny amin'ny tranombakoka tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Toerana tena tsara sy mangina izay mety hanome aingam-panahy ny olona rehetra, na dia tsy azo atao aza ny maka sary ao anatiny. Manohy mamaky ny Bastida del Jas de Bouffan izahay, toerana mahazatra an'i Cézanne izay nanombohan'ny asany voalohany ary trano ho azy. Ao amin'ny Quarry Bibemus dia hitantsika ny lokon'ny ocher izay nahasarika ny mpanao hosodoko teny amin'ny sisin'ny tanàna.
Tranombakoka ao Aix-en-Provence
Ho fanampin'ireo toerana nanentanana ny mpanao hosodoko Cézanne, ao amin'ny Aix-en-Provence dia afaka mahita tranombakoka maro hafa hitsidika antsika isika. ny Tranombakoka GranetOhatra, miorina amin'ny tranobe tsara tarehy izy, ao amin'ny lapan'i Malta taloha. Tsy isalasalana fa iray amin'ny zava-dehibe indrindra ao an-tanàna izy io, satria mirakitra ny sanganasa tamin'ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'ny faha-XNUMX niaraka tamin'ny mpanoratra toa an'i Cézanne na Rembrandt. Ao amin'ny Vasarely Foundation dia hahita fampirantiana samihafa isika mandritra ny taona. Ao amin'ny Hotel de Gallifet no ahitantsika trano kanto ao amin'ny manodidina an'i Mazarin, ao amin'ny tranobe taonjato faha-XNUMX misy fampirantiana isan-karazany. Ny Planetárium no toerana mety indrindra ho an'ny fianakaviana, satria misy hetsika ho an'ny ankizy kely.
Aza adino fa Aix-en-Provence dia miorina eo a tanàna romana taloha. Ny Katedraly Saint-Sauveur no trano fivavahana lehibe indrindra ary namboarina tsara teo amin'ny tempolin'i Apollo, teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, noho izany ny tranobe dia manana fomba isan-karazany. Ny fomba miavaka indrindra, na eo amin'ny fidirana na ao anatiny, dia ny fifangaroan'ny Romanesque sy Gothic.
La Plaza d'Albertas Izy io dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra amin'ny tanàna iray manontolo. Toerana toa zoron'ny fandriam-pahalemana amin'ny tanàna misy arabe ety. Miaraka amin'ny loharano afovoany dia misy lapa efatra manenjana azy. Ho fanampin'izany, tsy tokony hohadinointsika fa ity tanàna ity dia fantatra ihany koa ho toy ilay iray manana loharano arivo, ka azo inoana fa hahita loharano foana eo amin'ireo kianja hitantsika isika. Ny Plaza de la Mairie dia iray hafa tsy maintsy jerena. Miaraka amin'ny loharano misy azy sy trano vitsivitsy izay tsy maintsy jerena, toy ny Town Hall na Clock Tower, miaraka amin'ny famantaranandro manandro. Tamin'ny alahady dia nametaka tsenan-tanana faharoa izy ireo, ary misy kafe maro misy terraces fialan-tsasatra.
Ny fitsidihana ity faritra ao an-tanàna ity dia iray amin'ireo zavatra mahaliana indrindra tokony hatao. Làlana iray akaikin'ny bara sy trano fisakafoanana mahafinaritra, ary amin'ny lapan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo toerana malaza indrindra handany ny andro ao an-tanàna. Io ihany koa no habaka mampifandray ny manodidina an'i Mazarin, izay faritra vaovao indrindra, miaraka amin'ny Ville Comptale, izay faritra taloha.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Aix-en-Provence
Ny fahazoana io faritra atsimon'i Frantsa io dia tena tsotra, ary manana safidy hafa. Raha tonga amin'ny fiaramanidina isika, izay matetika no mahazatra indrindra, ny Seranam-piaramanidina akaiky indrindra dia Marseille, izay 25 kilometatra miala. Safidy haingana sy mora hafa koa ny fampiasana ny lamasinina haingam-pandeha izay 15 kilometatra miala ny gara misy azy. Manana zotram-pifandraisana mifandraika amin'ny tanàna mora foana izy io. Raha tonga amin'ny fiara isika, ny làlambe no safidy tsara indrindra noho ny fahamoran'izy ireo, na dia somary lafo aza.
Aiza no hijanonana ao Aix-en-Provence
Raha te hahalala ny tanànan'i Aix-en-Provence amin'ny lalina isika dia afaka mijanona amin'ny faritra taloha, na akaikin'ny Cours Mirabeau, faritra malaza misy hotely maro ary toerana hahitana trano honenana mora foana. Raha mila fitoniana bebe kokoa aza isika dia afaka miloka amin'ireo tanàna manodidina, na dia tsy maintsy mijery ny rohy fitaterana foana aza isika hahitana raha mendrika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita sy atao any Aix-en-Provence, France